Mbufịt tsunari egwu United States | Netwọk Mgbasa Ozi
David melguizo | | Ciencia, Ihe gbasara ihu igwe
Igwe ikuku nke La Palma Island na Cumbre Vieja
Ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ọmụmụ nke òtù dị iche iche mere kpebisiri ike ịdị adị nke ezigbo iyi egwu nke imepụta a mbufịt na Canary akipelago nke ga eru iji metụta nke ukwu United States, na-ebibi oke osimiri Africa ma na-emetụta oke akụkụ nke Atlantic Europe.
Agbanyeghi na enwere ihe omumu ndi ozo nke juru na ihe a, ihe omumu banyere ala na-enye echiche na n'oge mgbawa ugwu nke ugwu ugwu Cumbre Vieja n'àgwàetiti La Palma, ọdachi na-adachi nwere ike ịdaba na ọdịda nke oke okwute n'etiti 150 na 500 km³ nke oké osimiri ruo n'oké osimiri. Nke a n'onwe ya ga-abụ ihe omume dị ukwuu, mana karịa nke ahụ, ihe na-eme ka anyị kwuo okwu ọdachi nke ukwuu bụ mbufịt nke ahụ ga-eme ka nkume ahụ daa site n'oké osimiri ahụ.
N'iji ụdị iji mee atụmatụ maka mbugharị nke ọdịda ala, ịdị ukwuu nke ebili mmiri mbufịt nke ga-eweta ọdịda nke ụdị a (150-500 km³) na ọsọ nke 100 m / s nwere ike ịgafe Atlantic dum wee rute ụsọ ugwu North America. na ebili mmiri n'etiti 10-25 mita N’ọnọdụ kasị njọ.
Ọ bụrụ na ebili mmiri nke akụkụ ndị a ga-eme, mpaghara ndị dị ka Caribbean ma ọ bụ Florida ga-emetụta nke ọma, dịkwa ka obodo ndị dị n'ụsọ osimiri dịka New York ma ọ bụ Boston. Ndịda nke agwaetiti Britain na agwaetiti Iberia ga-enwe mmetụta dị ala karị, n'ihi morphology nke ebili mmiri ahụ. Ọnọdụ ụsọ oké osimiri Africa dị egwu karị, ebe ọ ga-abụ mbibi kpamkpam. Na mmebi onwe onye na ihe onwunwe enweghị atụ.
N’akụkọ ihe mere eme nile, a hụwo ọnọdụ ndị yiri nke a n’agwaetiti Canary. El Golfo, ugwu mgbawa dị na mgbago ugwu nke agwaetiti Hierro, ọ bụ ihe atụ. Site na sedimenti achọpụtara ọ ga - ekwe omume igosipụta na a mbufịt mepụtara site n'ọdịda nke akụkụ ugwu ugwu na-agbọpụ ọkụ mkpọtụ ruru n'ụsọ oké osimiri nke Madeira (600 km ọdịda anyanwụ nke Canaries) gburugburu 15000 afọ gara aga. Ihe mgbochi butere mbufịt tsunami a pere mpe pere mpe, yabụ tsunami nke mbuze ahụ mere na La Palma nwere ike iru United States.
Ozi ndị ọzọ - Ihe akpụrụ akpụ nke Liberty yigharịrị imeghe ya rue July 4 , Japan meziwanye usoro ịdọ aka ná ntị tsunami ya , Ala ọma jijiji 4,9 mere ka agwaetiti El Hierro maa jijiji
Isi mmalite - Oha obodo nke America, Akuku 13
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Oke mbufịt Canarian na-eyi United States egwu